आज साउन १५ खीर खाने दिन,यस्ताे छ साउनमा खीर खानुकाे महत्व ! - हेटौंडा टुडे
आज साउन १५ खीर खाने दिन,यस्ताे छ साउनमा खीर खानुकाे महत्व !
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:३८
साउन १५,हेटौंडा/‘असार १५ दही-चिउरा खानु, साउनको १५ खीर’ यो भनाइ नेपाली समाजमा लोकप्रिय रहेको छ । हरेक साल साउन १५ गतेका दिन खिर खाएर रमाइलो पर्वकै रुपमा मनाउने गरिन्छ ।आज पनि साउन १५, घरघरमा खीर र मिष्ठान्न खाएर यो पर्व मनाइँदै छ । परम्परादेखि नै साउन १५ मा खिर खानुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता नेपाली समाजमा छ ।वर्ष दिनभरिमा कहिले जौको सातु र सर्वत, कहिले दही चिउरा, क्वाँटी खाए जस्तै गरी हरेक साउन १५ मा खीर पकाई आपसमा बाँडेर खाने चलन छ । यसको सांस्कृतिक मात्रै नभई वैज्ञानिक महत्व पनि ठूलो छ ।